Ilaahay wuu inala jiraa, Kaniisada Dunida ee Switzerland Switzerland (WKG)
Xilliga Kirismasku waa inaga dambe. Sida ceelka, calaamadaha ciida Kirismasku dhamaantood waxay ku baaba'aan wargeysyadayada, telefishanka, daaqadaha dukaamada, dariiqa iyo guryaha.
Waxaad u badan tahay inaad maqashay odhaahda: "Kirismasku waxay dhacdaa sanadkii hal mar". Sheekada Kirismasku waa war wanaagsan oo ka timid xagga Eebbe oo aan mar uun ku soo dhicin, sida uu ugu sameeyey reer binu Israa'iil. Waa sheeko ku saabsan Immanuel, "Ilaah ha inala jiro" - kaas oo had iyo jeer jira.
Markay duufaantu nolosha noogu soo dhacdo dhinac walba, way adag tahay in la garto in Ilaah nala jiro. Waxaan dareemi karnaa inuu Ilaahay hurdo, sidii ay ahayd markii Ciise la raacay xertiisii ​​iyo xertiisii: «Markaasuu doonnidii fuulay xertiisiina way soo raaceen. Oo bal eeg, waxaa badda ka kacay duufaan weyn, ilaa ay hirarku qariyeen doonnida. Laakiin wuu hurday. Markaasay isaga u yimaadeen oo intay toosiyeen oo ku yidhaahdeen, Sayidow, na caawi, waannu lumaynaaye. (Matayos 8,23: 25).
Waqtigii dhalashadii Ciise la saadaalin lahaa, waxay ahayd xaalad duufaano ah. Yeruusaalem waa la soo weeraray: "Waxaa loo sheegay reerkii Daa'uud in reer Suuriya soo degeen dalka reer Efrayim. Markaasaa qalbigii iyo qalbigii dadkiisuba waxay u ruxmadeen sida geedaha duurka ku dhex ruxmaya dabaysha hor socda (Ishacyaah 7,2). Ilaah wuxuu aqoonsaday cabsida weyn ee Boqor Aaxaas iyo dadkiisii ​​ay ku jireen. Sidaas daraaddeed wuxuu u soo diray Ishacyaah inuu u sheego boqorka inuusan cabsan, maxaa yeelay, cadaawayaashiisu way adkaan doonaan. Sida inteena badan xaaladaha noocan oo kale ah, Boqor Aaxaas ma uusan rumeysan. Oo haddana Ilaah wuxuu Ishacyaah mar kale u soo diray farriin kale oo yidhi, calaamad ka weyddiista Rabbiga Ilaahaaga ah inuu tuso inuu xagga hoose ka hooseeyo ama ka kor yahay. (Ishacyaah 7,10: 11). Boqorka wuxuu dareemay xishood badan inuu tijaabiyo ilaahiisa asaga oo weydiisanaya calaamad. Sidaas daraaddeed Ilaah wuxuu Ishacyaah ku yidhi, Sidaas daraaddeed Sayidku calaamo buu kuu yeeli doonaa. Bal ogaada, gabadh bikrad ah baa uuraysan doonta oo wiil umuli doonta; (Ishacyaah 7,14). Si loo caddeeyo inuu iyaga xorayn doono, Ilaah wuxuu siiyay calaamadda Dhalashada, oo loogu yeedhi doono Imaamil.
Sheekada Kirismasku waa inay maalin walba ina xasuusisaa in Ilaah nala jiro. Xitaa haddii xaaladdu u egtahay mid qallalan, xitaa haddii aad shaqadaada weyday, xitaa haddii qof qaali ah uu dhinto, xitaa haddii aad ku guul darreysatay koorsadaada, xitaa haddii saygaaga / xaaskaaga uu kaa tagay - Ilaah baa kula jira!
Macno malahan inta xaaladaadu dhimatay, ilaahay baa kugu dhex jira isagaa nolol kugu keena. "Miyaad aamintay taas"? Wax yar kahor Ciise iskutallaabta lagu qodbay oo uu jannada ku laabto, xertiisu aad bay uga welwelsanaayeen maxaa yeelay ma sii jiri doono iyaga. Ciise wuxuu ku yidhi,
«Laakiin maxaa yeelay, adigaan kula hadlay, Qalbigaaga murug baa ka buuxsantay. Laakiin runta ayaan kuu sheegayaa: waxaa kuu wanaagsan inaad iska tagto. Sababta oo ah haddaanan tagin, Gargaaruhu kuu imaado. Laakiin haddaan tago waan kuu soo diri doonaa » (Yooxanaa 16,6 -8). Oo kaa qalbi qabowgu waa Ruuxa Quduuska ah ee idinku dhex jira. "Haddii ruuxii kuwii Ciise ka soo sara kiciyey kuwii dhintay haatan idinku dhex jiro, kii Masiixa kuwii kuwii dhintay ka soo sara kiciyey jidhkiinna dhimanayana wuxuu ku noolayn doonaa Ruuxi idinku dhex jira." (Rooma 8,11).
Ilaahay had iyo jeer wuu kula jiraa. Waxaad la kulmi kartaa jiritaanka Ciise maanta iyo weligiis!